Warka - Soo saaraha
Shirkadda KingTai waa soo saare ganacsi oo dhammaystiran oo isku-dhafan wax-soo-saarka iyo iibka.Waxaan leenahay warshad noo gaar ah iyo kooxda iibka dibedda, warshadeennu waxay ku taal Hui Zhou City Guangdong Province.Oput celcelis ahaan wax soo saarkeennu waa in ka badan 300,000 kumbuyuutar bishii.
Shirkadeena waxay in ka badan 20 sano khibrad u leedahay farshaxanka birta.
Sida: calaamadda, furaha, billadaha, keychain, xusuus-qor, kabadhka, lapel pin, calaamadda, iwm Waxaanan la shaqeynaa noocyo badan oo caan ah, sida: Harry Potter, Disney, Wal-mart, Universal Studios iwm.
Tan iyo markii la aasaasay, Shahaadada iyo shatiyadaha aan helnay waxay ka badan yihiin 30 qaybood, dhowr ka mid ahna ay yihiin SOS, Sedex iyo ISO9001.
Waxaan marwalba u hogaansanahay wax soo saar sare, heerar tayo sare leh oo naftooda ubaahan Kadib dhammeystirka geeddi-socod kasta, waxaan leenahay koox QC gaar ah oo hubisa in badeecadahu ay waafaqsan yihiin habka xigga, si loo hubiyo heerka alaabooyinka u qalma.
Shirkaddu waxay leedahay awood wax soo saar oo ku filan iyo awood ay wax ku keydiso, caadi ahaan, markii kooxdayada QC ay kormeerayaan alaabada, waxay soo qaadan doonaan badeecadaha aan u qalmin oo waxay u oggolaan doonaan badeecadaha u qalma inay galaan hawsha xigta. Markaa badeecadaha aan u qalmin waxaa lagu soo celin doonaa hanaankii hore ee dib loo sifeynayay isla mar ahaantaana, waxaan leenahay baaxad aan ku xakameyno heerka gudbinta alaabada inta lagu guda jiro kormeerka.This waxaa loo dejiyay iyadoo loo eegayo alaabooyin kala duwan. Tusaale ahaan, heerka u qalmida kaarkaagu waa 95%. Marka badeecada aan u qalmin ay ka sarayso tan, waxaan dib u cusbooneysiineynaa badeecada aan u qalmin. Fadlan nala soo socodsii haddii heerkaaga baas ee aad fileyso uu yahay 98%, si aan u bixin karno heerka pass ee badeecada inta lagu jiro kormeerka. jawiga si loo taageero amarada waaweyn Fadlan nala soo socodsii haddii aad u baahan tahay shixnad qayb ah. Bakhaarkeena ayaa daryeeli doona keydinta alaabta.
Maanta King King wuxuu la shaqeeyaa ujeedka adeegga koowaad ee macaamiisha wuxuuna ka qeybgalay carwada carwada iyo hong kong. Sanado badan. Waxaan u fidinaa adeeg daacad ah macaamiisha isla markaana ku ilaalinaa hal-abuurnimada waji ka kooban abuuritaanno wanaagsan.